Bit By Bit - agba nwere - 4.4 N'ịga n'ofè mfe nwere
K'anyị gafee ihe ndị dị mfe. Echiche atọ dị irè maka ọganihu bara ọgaranya: nkwado, nchịkọta nke ọgwụgwọ, na usoro.
Ndị na-eme nchọpụta bụ ndị ọhụrụ na-enyocha na-elekwasịkarị anya n'otu ajụjụ dị nkenke ma dị warara: Ọgwụgwọ a ọ "na-arụ ọrụ"? Dịka ọmụmaatụ, oku na-akpọ onye ọkenye ọrụ na-agba onye ọ bụla ume ịme ntuli? Ịgbanwe bọtịnụ mkpokọta site na acha anụnụ anụnụ ruo akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-eme ka ọnụọgụ-pịa ọnụego? O bu ihe nwute, mmeghari aka banyere ihe "oru" na-eme ka eziokwu ahụ doo anya na nyocha a na-esiri ike adịghị agwa gị ma ọgwụgwọ ọ "na-arụ ọrụ" n'ozuzu ya. Kama nke ahụ, ihe ndị a na-ahụ anya na-aza ajụjụ a kapịrị ọnụ karị: Gịnị bụ mmetụta utịp nke ọgwụgwọ a kpọmkwem na mmezi a kapịrị ọnụ maka ọnụ ọgụgụ ndị a na-amụ n'oge a? Aga m akpọ nwere na-elekwasị anya na nke a dị warara ajụjụ dị mfe nwere.
Ntụle dị mfe nwere ike inye ihe ọmụma bara uru, ma ha anaghị aza ọtụtụ ajụjụ ndị dị mkpa na ndị na-adọrọ mmasị, dịka ma ọ bụ ndị mmadụ maka ọgwụgwọ ahụ ka ọ dị ukwuu ma ọ bụ obere mmetụta; ma ọ bụ ọgwụgwọ ọzọ ga-adị irè karị; na ma nnwale a ọ na-emetụta echiche ọma ọha na eze.
Iji gosipụta uru ị ga-eji na-agafe karịa ule dị mfe, ka anyị tụlee nchọpụta analog nke P. Wesley Schultz na ndị ọrụ ibe ya gosipụtara banyere mmekọrịta dị n'etiti usoro mmekọrịta mmadụ na ume ike (Schultz et al. 2007) . Schultz na ndị ọrụ ibe ha kwụwara ọnụ ụlọ 300 na San Marcos, California, ndị ọrụ a na-ezigakwa ozi dị iche iche iji kwado ume nchekwa. Mgbe ahụ, Schultz na ndị ọrụ ibe gị tụnyere mmetụta nke ozi ndị a na ọkụ eletrik, ma mgbe otu izu na izu atọ gasịrị; lee onu ogugu nke 4.3 maka nkowa di omimi banyere atumatu nyocha.
Onyonyo 4.3: Usoro nke imepụta ihe site na Schultz et al. (2007) . Ihe omuma nke ubi ahu bu ileta ihe dika mmadu ato na San Marcos, California ugboro ise n'izu izu. Na nleta ọ bụla, ndị na-eme nchọpụta ji aka ha gụọ akwụkwọ site na mita igwe. N'ime nleta abụọ, ha na-etinye ọnụ ụzọ na ụlọ ọ bụla na-enye ụfọdụ ozi gbasara iji ike ụlọ. Ajụjụ nyocha ahụ bụ otú ọdịnaya nke ozi ndị a ga-esi emetụta ike iji.
Nnwale ahụ nwere ọnọdụ abụọ. Na mbụ, ndị ezinụlọ natara ndụmọdụ izu ike zuru ezu (dịka, iji ndị fụrụ kama ịnweta ikuku oyi) na ihe ọmụma gbasara ike ha jiri tụnyere ọnụ ọgụgụ ndị ike na mpaghara ha. Schultz na ndị ọrụ ibe ya na-akpọ nke a na- akọwa ọnọdụ normative n'ihi na ozi gbasara ike iji na-eme ihe n'ógbè ahụ nyere ihe ọmụma banyere omume ndị a na-ahụkarị (ya bụ, usoro nkọwa). Mgbe Schultz na ndị ọrụ ibe ya na-ele anya ike iji mee ihe na ìgwè a, ọgwụgwọ ahụ pụtara na ọ dịghị enwe mmetụta ọ bụla, ma ọ bụ obere oge ma ọ bụ ogologo oge; na okwu ndị ọzọ, ọgwụgwọ ahụ adịghị ka "ọrụ" (ọnụ ọgụgụ 4.4).
N'ụzọ dị mma, Schultz na ndị ọrụ ibe ya edozighị maka nyocha a dị mfe. Tupu nnwale ahụ amalite, ha chere na ndị ọrụ ọkụ eletriki-ndị mmadụ karịrị nke pụtara-nwere ike belata ihe oriri ha, na ndị ọrụ ọkụ eletrik-ndị dị n'okpuru ala-nwere ike ime ka ha nwekwuo ike. Mgbe ha lere anya na data ahụ, nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ha hụrụ (nọmba 4.4). N'ihi ya, ihe dị ka ọgwụgwọ nke na-enweghị mmetụta bụ n'ezie ọgwụgwọ nke nwere mmetụta abụọ iwepụ. Ọganihu a na-arụpụtaghị ihe n'etiti ndị ọrụ ọkụ bụ ihe atụ nke mmetụta nchịkwa boomerang , ebe ọgwụgwọ nwere ike inwe mmetụta ọzọ site na ihe e bu n'uche.
Onyonyo 4.4: Ihe si na Schultz et al. (2007) . Panel (a) na-egosi na nhazi ọgwụgwọ akọwapụtara emeela ka a mata atụmatụ mgbatị dị ala. Otú ọ dị, panel (b) na-egosi na ọkpụkpụ ọrụ ọgwụgwọ a bụ nke nwere mmetụta abụọ iwepụ. Maka ndị ọrụ dị arọ, ọgwụgwọ ahụ na-ebelata ojiji ma maka ndị ọrụ ọkụ, ọgwụgwọ ahụ mụbara iji. N'ikpeazụ, panel (c) na-egosi na ngwọta nke abụọ, nke na-eji nkọwa na iwu arụ ọrụ, nwere mmetụta dị otú ahụ n'ahụ ndị ọrụ dị elu ma na-eme ka mmetụta ndị dị na ndị ọrụ ìhè kpuchie ya. E si na Schultz et al. (2007) .
Na simultaneous ọnọdụ mbụ, Schultz na ndị ọrụ ibe ha gbakwara ọnọdụ nke abụọ. Ezinụlọ ndị nọ n'ọnọdụ nke abụọ natara ọgwụgwọ ahụ kpọmkwem-izugbe ndụmọdụ nchekwa ume na ozi banyere ike ejiji nke ụlọ ha jiri ya tụnyere ọnụ ọgụgụ maka agbata obi ha-otu obere mgbakwunye: maka ndị mmadụ na-eri nri ala, ndị nnyocha ahụ kwukwara, sị: ) na ndi mmadu nwere ihe ndi ozo di elu na-agbakwunye :(. Ebumnobi ndi a ka ha kpalite ihe ndi na-acho na-acho iwu ndi mmadu na- acho ihe ndi mmadu na-acho aka na ha . ihe a na-emekarị (Reno, Cialdini, and Kallgren 1993) .
Site na itinye otu obere emoticon a, ndị nnyocha ahụ ji nwayọọ nwayọọ belata mmetụta mmụba (fig 4.4). Ya mere, site na ime ka nke a bụrụ mgbanwe dị mfe-mgbanwe nke mkparịta ụka na-ahụ maka ọdịmma mmadụ (Cialdini, Kallgren, and Reno 1991) - agbanwe agbanwe - ndị nchọpụta ahụ nwere ike ịgbanwuo usoro nke na - anaghị arụ ọrụ n'ime ọrụ, na, n'otu oge ahụ, ha nwere ike inye aka na nghọta zuru oke banyere otú usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya si emetụta àgwà ụmụ mmadụ.
N'oge a, Otú ọ dị, ị nwere ike ịchọpụta na ihe dịtụ iche banyere nnwale a. Karịsịa, nchọpụta nke Schultz na ndị ọrụ ibe ya adịghị enwe otu njikwa n'otu ụzọ ahụ nke nyocha ndị a na-achịkwa. Ntụle dị n'etiti ihe a na nke Restivo na van de Rijt na-egosi ọdịiche dị n'etiti atụmatụ abụọ bụ isi. N'etiti ndị na -achịkwa atụmatụ , dị ka nke Restivo na van de Rijt, e nwere otu ìgwè ọgwụ na otu njikwa. Na n'ime-achị aghụghọ, na aka nke ọzọ, omume nke sonyere na-tụnyere tupu mgbe ọgwụgwọ (Greenwald 1976; Charness, Gneezy, and Kuhn 2012) . Na nyocha nke ime n'ime ya, ọ dị ka ọ bụrụ na onye ọ bụla so na-arụ ọrụ dịka njide onwe ya. Ike nke ihe dị iche iche dị iche iche bụ na ha na-enye nchebe megide ndị na-atụgharị uche (dịka m kọwara na mbụ), ebe ike nke ihe ndị dị n'ime-ahụ na-eme ka ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke atụmatụ. N'ikpeazụ, iji gosipụta echiche nke ga-emesị mgbe m nyere ndụmọdụ banyere ịmepụta nyocha dijitalụ, a na-emepụta ihe ndị dị n'ime imepụta ihe na nchebe maka imebi ihe ndị dị n'etiti mmadụ (atụmatụ 4.5).
Akwukwo nke 4.5: Atumatu atumatu ato. Nlereanya nke usoro a na-ejikọta nke ọma na-eji ihe dị iche iche dị iche iche. Otu ihe atụ nke ihe dị iche iche dị n'ime afọ bụ nchọpụta Restivo na van de Rijt (2012) na barnstars na onyinye na Wikipedia: ndị na-eme nchọpụta enweghị ike ịkere òkè n'ime ndị na-agwọ ọrịa na ndị na-achịkwa, nyere ndị na-eme nhazi ahụ otu barnstar, ma tụnyere nchọta nke ìgwè abụọ. Ụdị ụdị nke abụọ bụ mmepụta ihe dị n'ime . Nyocha abụọ ahụ e mere na Schultz na ndị ọrụ ibe (2007) ọmụmụ banyere usoro mmekọrịta mmadụ na ike ya na-egosipụta ihe ndị dị n'ime n'ime ha: ndị na-eme nchọpụta jiri ya tụnyere ikike eletrik nke ndị na-eso ụzọ tupu mgbe ha natara ọgwụgwọ ahụ. Ndị na-achịkwa ihe ndị na-eme ka ha nwee ike ịkọwapụta nke ọma, ma ha nwere ike ime ka ndị nwere ike ime ihe (eg, mgbanwe nke ihu igwe n'etiti ọgwụgwọ na ọgwụgwọ) (Greenwald 1976; Charness, Gneezy, and Kuhn 2012) . A na-akpọkwa ihe ndị ọzọ n'ime ihe ndị a na-emekarị ka a na-achọpụta ihe ndị ọzọ. N'ikpeazụ, ngwakọta a na- ejikọta nkwekọrịta dị mma nke nkwekọrịta n'ime ihe ndị dị n'ime na nchebe megide ịmeghasị ihe dị iche iche dị n'etiti ndị mmadụ. Na nhazi nke ndi mmadu, otu onye nyocha choro ngbanwe nke ihe ndi mmadu na ndi ozo na ndi na-achikota. Mgbe ndị na-eme nchọpụta enweela ọgwụgwọ tupu oge ahụ, dị ka ọ dị n'ọtụtụ nchọpụta dijitalụ, atụmatụ dị iche iche na-adịkarị mma maka atụmatụ ndị dị n'etiti ha n'ihi na ha na-eme ka nkwekọrịta dị mma nke atụmatụ.
N'ozuzu ya, nhazi na nsonaazụ nke Schultz na ndị ọrụ ibe (2007) egosi uru ị ga-eji na-agafe karịa ule dị mfe. Ọ dabara na, ọ dịghị mkpa ka ị bụrụ onye nwere ọgụgụ isi imepụta nlele dị ka nke a. Ndị ọkà mmụta sayensị azụlitewo atụmatụ atọ nke ga-eduzi gị gaa nyocha ndị bara uru: (1) irighiri ihe, (2) usoro dị iche iche nke ọgwụgwọ, na (3) usoro. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ị na-eche echiche atọ ndị a n'uche mgbe ị na-eme nyocha gị, ị ga-emepụta nyocha ọzọ na-adọrọ mmasị na nke bara uru. Iji mee ka atumatu atumatu ato a di iche iche, m ga akowa otutu nyocha nke uzo di iche iche di iche iche nke wuru na ihe mara mma nke Schultz na ndi otu ibe (2007) . Dị ka ị ga-ahụ, site na iji nlezianya edozi, mmejuputa, nyocha, na nkọwa, gị onwe gị kwa nwere ike ịgabiga ule dị mfe.